Hevitra MPANOHARIANA | Septambra 2016
Misy ny vahaolana hafa ankoatra ny fanenjehana mpivarotra amoron-dalana
2016-09-24 @ 19:58 in Andavanandro
Efa zary fiainana isan'andro ny fifanenjehana eo amin'ny mpivarotra amoron-dalana sy ny mpiasan'ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Efa nandeha moa tany alohaloha tany hoe ho hita eo ihany izay reraka aloha eo amin'izy roa tonta. Ny azo lazaina kosa, raha amin'ny endriny toy izao dia tsy hahafoana ny mpivarotra amoron-dalana mihitsy ny zavamisy ankehitriny. Ho sasa-poana ny Kaominina, indrindra fa efa misy mpampirisika ihany koa ny mpivarota amoron-dalana, ary misy mpiray tsikombakomba amin'ny sasany amin'ireo mpivarotra amoron-dalana ireo ihany koa ny sasantsasany amin'ny mpandrava ny varotra ataony.
Eo amin'ny sokajin'olona ivelan-dry zareo dia mizara roa ihany koa ny fisainana. Ny sokajy voalohany dia ireo efa resy lahatra hatry ny ela fa tsy handroso sy tsy hivoatra mihitsy ny tanàna raha tsy miala ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Ny sokajy faharoa kosa dia ireo be fitserana fa tena tsy rariny kosa ny atao amin'ny mpivarotra amoron-dalana fa mba mamelom-bady aman-janaka ihany koa izy ireo. Sabatra roa lela noho izany no eo am-pelantanan-dRtoa Ben'ny Tanàna Rakotonirainy Lalao. Maro kokoa ireo mankasitraka ny ataony amin'ny tsy-fandeferana manoloana ny lalàna nefa mahay vava loatra ireo mpifanandrina aminy ka hainy ny mamadika io hetsika tsara io ho lasa fieritreretana fa fanenjehana sy famonoana ny 'mahantra' no ataony fa tsy misy fifampitsinjovana mihitsy. Manana haino aman-jery daholo ireo mpanenjika azy fa izy kosa dia lalan-tokana ihany no azony ampitana ny seraserany dia ao amin'ny media sosialy. Efa hery io saingy tsy ampy velively noho ny tsy mbola fahafehezan'ny rehetra ireo fitaovana ireo.
Inona ary no atao? Tohizana amin'izao endriny izao ve ilay asam-panadiovana sa tadiavina ihany koa ny fomba ambadika ahafahana manongotra ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana ireo? Tsara noho izany ny mijery ireo mpamatsy entana ireo mpivarotra ireo sy mitady ny fomba hanasaziana azy ireo fa tsy ireto olona hitamaso ireto ihany no atao mihamafy fo isan'andro.
Mba atao fakan-tahaka ny nataon'ny Filohan'ny Tetezamita fahaefatra niaraka tamin'ny lehiben'ny Madarail, sady mpinamana rahateo ry zareo ireo, nanaisotra amin'ny fomba mihaja ny kianja filalaovana baolina lavalava hiala teo Antanimena ho lasa any Andohatapenaka. Ilay tany malalaka teny amin'ny anaran'ireo sampan'orinasan-dRavalomanana Marc ihany no nakana hanaovana ilay lazaina ho kianja manara-penitra, nomena anarana manasohaso, mba hahafinaritra ny mpijery sy andresena lahatra azy ireo fa efa tery ny eo Antanimena ka eny indray no hanaovana ny lalao isaky ny faran'ny herinandro. Nahomby ny famindrana satria tsy narary fo tamin'ny famindran-toerana ny mpankasitraka baolina lavalava nefa voaaisotra tanteraka tsy hilalaovana baolina lavalava intsony ny kianjan'ny Malacam.
Voalohany, ataovy ao an-tsaina fa 'tsy mahantra' velively ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Izay mahafantatra ahy dia mahalala fa efa niasa teny Soarano-Ambodifilao aho, ary tsy vitsy amin'ireo mpivarotra ireo, indrindra fa ireo mihoatra ny efa-taona no niasana teny no mahalala ahy na ny endriko farafaharatsiny. Mahafantatra ny sasany amin'izy ireo ihany koa aho ary misy ny efa niresaka tamiko ny isan'ny trano natsangany tamin'ny fivarotana amoron-dalana teny amin'io faritra io. Tsy mino ianareo fa tsy latsaka ny telo izany trano izany sady mijoalajoala avokoa fa tsy hoe trano tsy misy rihana na trano zara fa vita. Nahita ny fitomboan'isan'izy ireo aho ary nahatsikaritra fa ry zareo efa mivarotra eo mihitsy no miantso ny namany avy any ambanivohitra na faritra hafa hanampy azy ireo sy hiara-hihary amin'izy ireo.
Raha izay tsikaritro izay no iaingana dia tsy ireo hitanao maso ireo ihany no mahazo volabe fa mitavana ihany koa ireo mpamatsy entana azy ireo, samy tsy mandoa hetra ary azo ahiahiana fa tsy nandoavana fadin-tseranana koa ny entana nampidirina matoa tsy voakaonty, tsy voatery ho entana avy any amin'ny faritra afa-kaba naodina noho izany ireo entana amidy ireo fa betsaka ny nohafarana. Sady tsy mandoa hetra izany ireo mpivarotra ireo no azo ahiahiana ho tsy mandoa hetra ihany koa ny mpamatsy entana azy ireo.
Ka raha te-hanafoana haingana ny mpivarotra amoron-dalana dia izay atao amin'ireo mpamatsy entana azy ireo eritreretina sy jerena ny fandikan-dalàna ataony. Azo atao ihany koa ny mametraka lalàna manasazy ny mpividy entana amin'ny mpivarotra amoron-dalana ho manao tsikombakomba amin'ny fanakorontanana ny filaminan'ny tanàna. Manjaka loatra ny gaboraraka ka tsy maintsy misy ny tanjona lavitra ezaka amin'ny alalan'ny fanabeazana, saingy mbola fanamby hafa ihany koa izany fa ireo mpamatsy sy mpividy izao no tanjona fohy ezaka itadiavam-bahaolana.